Diyaaradihii dagaalka ee Soomaaliyeed iyo dagaalyahannimada C/hi oo isku door qaatay.
Waxaa la oran jiray:
Diyaarad Soomaali dagaal ma gashooy
Markay duushana Afgooye degaay.
Marna lagama wado in aysan diyaaradihii dagaalka ee Soomaaliyeed ka qaybqaadan dagaaladii lala geleyey cadowga Soomaaliyeed waxaana dhici karta in duuliyayaal ku dhinteen, qaarkoodna ku dhaawacmeen. Laakiin waxaa aad ugu gacan sarreeyey ciidanka cirka ee Itoobiya. Qof kasta waa garanayaa dhibtay ku hayeen Soomaaliya dagaalkii 1977 ka dib. Gobollo badan ayey diyaaradahaasi dukheeyeen oo ay ka mid tahay Hargeysa.
Diyaaradaha dagaalka ee Soomaaliya waxay aad ugu dheereeyeen ka qaybgalka dabbaal-degyada Soomaaliya sidii Octoobarradii oo qaar ka mid ah duuliyayaashii ay ku dhinteen iyagoo Octoobarta maraya. Waxaa loo adeegsaday diyaaradahaas arrimo lid ku ahaa Diinta Islaamka iyo binu Aadanimada. Waa la garanayaa in labo diyaaradood isku dhaceen markii la toogtay dadkii culumada ahaa ee diiday qodobbadii Diinta Ilaahay lidka ku ahaa. Waxaa dhici karta in dad badani udaawasho tageen markii la tooganayey wadaadadaas.
Meelihii kale oo diyaaradahaasi si xallad leh uga qaybqaateen waa dagaalkii Sokeeye ee Soomaaliya khaasatan burburintii magaalooyiinkii waaweynaa ee Waqooyiga.
Qab-qablaha dagaal ee aan diyaaradahaas ku mataalayaa waa kornayl C/hi oo xooggiisu noday mid xarkaha “Puntland” jaray.
Taageerayaasha kornaylka haddaad waydiiso waxay ku oran waa halyeey! Anigu waxaan qabaa in arrintaas dib loogu noqdo oo kalmadda halyeey laga dhigo labo kalmadood marka C/hi loo isticmaalayo sida hal yeey = “one wolf” oo ah hal uubato. Dagaalkii 1977 ee uu ka galay dhinaca Baali war badan kama hayo laakiin halkaasi maahayn meeshii ay dagaalada ugu kharaari ka dhaceen. Meelihii ciidamada badankooda la isugu geeyey waa dhinaca laga bilaabo Dhagaxbuur, Goday, Jigjiga, iyo Dirirdhaba. Si kastaba ha ahaatee aan wax ka xusno dhacdooyinii uu sameey:
1- Hadduu xukun doonyahay lama rabin inuu Kenya galo ee waxay ahayd inuu ciidankii uu haystay uu Xamar ku soo aado ilayn Xamar waxaa joogay ciidan yar oo Moorgan watay oo uusan Cirro laftiisu dhib u arag. Cirro imisa ciidan buu rabay inuu Maxamed Siyaad ku cinqilaabo? Qayb? Gaas? Guuto? Midna ma ahayn.
2- Dagaaladii sokeeye oo uu bilaabay. Iyaga qof kasta waa ka dheregsanyahay.
3- Dadkii mucaaradka ahaa ee isugu tagay Itoobiya ayuu isku- wadi waayeey oo wuxuu gaaray inuu mu’aamaro ku dilo kii fikrad ku khilaafaba. Qaar badan waa iskaga tageen Itoobiya oo uu Cadde Muuse ka midyahay.
4- Intii sooca ahayd ee qabiil ahaan ugu soo hartay xittaa isku wadan waa oo wuxuu dhex-dhigay colaad iyo iska horkeen.
5- Qisadii ugu darnayd waxay dhacday markay ka gadoodeen wiilashii uu xukumay oo intooda badan ay ilaa lix oday kala tirsadaan. Markii ay diideen amaridiisii ayuu wuxuu ku wareejiyey ciidamo Amxaaro oo aad u badan. Meeshuu Waa Galdogob. Wuxuu amar ku siiyey in markii waaguu beryo ay kuli dilaan ama is-dhiibaan. Wiilashii markay arrintii ogaadeen ayey goosteen inaysan waaga sugin ee ay habaynimo baxaan. Markii ay isku dayeen inay istaaraan dhowr tank iyo dhowr baabuur oo xamuulka ah oo ay wateen ayaa Amxaaradii dab saartay laakiin waxa halkaas ka dhacay arrin la yaab leh in wiilashii aan aadka u badnayni wax badana ka hubyaraa Amxaarada inaan wax saas ah gaarin oo la arkay iyagoo barqadii Gaalkacyo taagan. Dadka hadda isaga taageersan waxaa ka mid ah qaar iyagii ka mid ah. Haddii habaynkii ay Amxaaradu layn lahayd muxuu ka heli lahaa? Qaar ciidanka ka mid ahaa oo degmada ku jiray meel ay ruux iyo raq dhigeen lama hayo.
6- Sidoo kale tuulada Qorrof waxaa gadooday wiilal aan badnayn oo Xabishida ka dalbayey in kornaylka la sii daayo. Ciidan ka yar 200 boqol in ay Mingiste ka dalbaan in uu C/hi sii daayo waxay ahayd arrin is miidaamis ah. Wiilashaasi sidii kuwii Galdogob nasiib ma lahayn ee Xabashidu waxay dishay intoodii badnayd oo ay ku jireen rag dugsiyo sare dhameeyey iyo kuwo aqoon lahaa. Wali qaarkood lama arag meel ay cirib iyo jaan dhigeen.
7- U soo gal Puntland, muxuu u qabtay? Yuu ka ceshay? Qabsashadii Caydiid ee Gaalkacyo way ka horaysay sidoo kale saaritaankii Caydiid laga saarayna way ka horaysay laakiin wuxuu joogay dhowr dagaal oo kale oo aan kaas hore u dhowayn.
8- Doorashadiisii loo doortay madaxweyne goboleedka ka hor Puntland waxay ahayd meesha Soomaaliya ugu nabadgelyo fiican. Waxaa la hadal hayey in shir dib-u-heshiisiin lagu qabto Boosaaso. Yaa hadda hawo ka haysaa in Puntland shir lagu qabto?
9- Isagaa laalay inuu raaco dastuurkii Puntland markii waqtigii u dhaamaday. Wuxuu hadda u doodayaa in aan qodobka 19-naad ee “Charter” aan la taaban halka uu isagu kii 32-aad ee Puntland jebiyey (ma hubo inuu qodobku kaas ahaa).
10- Markii shacabku ka saarayeen Boosaaso wuxuu isku deyey inuu la dagaalo, markii uu dadweyne badan dilay ayaa askartii arkeen inaysan macquul ahayn inay shacabkoo dhan laayaan waxayna yaqiinsadeen in aan shacab laga rayn karin.
11- Waa isagii habaynimo soo weeraray markii dadkii doorteen Jaamac Cali Jaamac oo ay halkaas ku dhinteen dad badan.
12- Wuxuu maalmo ka hor dilay Faarax Dheere
13- Markii uu Boosaaso xoogga ku qabsanayey wuxuu cagta sii mariyey magaalooyin badan oo ay ku jirtay Qardho wuxuuna ku dilay dad shacab ah.
14- Mudo yar ka dib wuxuu dilay Suldaan Hurre.
15- Dagaaladii badnaa ee ay isla galeen GBP iyo isagu immisa qof baa ku dhimatay? Imisa qarash ku baxay?
Hadda waxaan ka hadlayaa xagga siyaasadda iyo xulufaysiga ee yaan loo fahmin waxaan anigu aaminsanahay.
1- Markii loo dooranayey madaxweyne gobolleed dadka halkaas degeni waxay lahaayeen saaxiibo badan oo ukala jooga Kismaayo, Bay iyo Bakool, iyo waliba Xamar.
2- Wuxuu lumiyey saaxibadaas sida Muuse Suudi, Aadan Madoobe ka dib markii uu RRA la kala saftay isagoon saadaalin karin meesha siyaasaddu cago-dhigan doonto, Cismaan Caato. Miyeysan Cismaan Caato iyo Ina Caydiid ka soo degin Garoowe?
3- Mar kasta oo uu hadlo wuxuu lumiyaa saaxiibo ilayn qof sixi kara ma lahee.
4- Yaa sababay in Muuse Suudi Kismaayo ka dego? C/Qaasim iyo Muuse is arkaan? Barre Hiiraale Xamar yimaado? Sidee ku samaysantay G8?
5- Xagga qab-qabnimada marka laga hadlayo wuxuu lumiyey kuwii xoogga lahaa ee aan kor ku sheegnay wuxuu soo qaatay bedelkood Xasan Abshir iyo Cabdalle Deeroow! Xasan Abshir Garoowe ma tagi karo haddaan C/hi u ogolaan sidoo kale Deeroow Baydhabo ma tagi karo haddaan Aadan Madoobe iyo Xaabsade u ogolaan.
6- Wuxuu dab iskaga dhejiyey Waqooyi oo maamulka Riyaale iyo mucaaradkiisu ma jecla C/hi oo waxay hadda wadaan arrin dhibteeda ugu badan soo gaarayso C/hi ilayn isagaa isku furay waddooyin badan oo aan loo baahnayn.
7- Iyadoo isaga loo marmarsiyoonayo waxaa dhib ku qaba shacabka degen Sool, Cayn iyo Sanaag Bari.
8- Waxaa hadda ka soo horjeestay qaar ka mid ah SRRC iyagoo ku haysta qodobka 19-naad. Runta markii loo hadlo dadkoo dhan waxay qireen inay Puntland ahayd meel nabad ah C/hi ka hor. Way ogyihiin in xittaa haddii Puntland loo daayo dowlad goboleed ayna Soomaali kale dhib ku hayn laakiin waxay ka dabaakhayaan hadaladiisii BBC-da iyo iyadoo laga urinayo Amxaarada. Wuxuu kaloo caadaystay in dad kale aysan muhiim ahayn.
9- Isaga iyo taageerayaashiisa oon wali ka waantoobin in ay iska daayaan Diinta iyo dadkeeda. Waxaan xasuusanaa in maalmo ka hor taageerayaasha C/hi ay Booliiska iyo ciidanka sirta ee jooga Garoonka Caalamiga ah ee Jomo Kenyetta, Kenya usheegeen in tartamaha ka socda Puntland Al-Xaaji Maxamed Yaasiin uu argagixiso yahay.
10- C/hi oo dhaqaalihii Puntland ku khasaariyey RRA iyo SRRC oo uusan maanta waxba ka hayn, maxay Punltand ka sii dheefaysaa hadduu mideeyo dadkii ka soo horjeeday oo dhan sida shirkii shalay ka dhacay Xamar? Haddii C/hi Puntland u mideeyo C/Qaasim, Muuse Suudi, Barre Hiiraale, Aadan Madoobe & Xaabsade, Cumar Jees, C/Risaaq Biixi. Sidoo kale ay ka soo horjeedaan Qanyare, Mowliid Macaane, Puntland qayb ka mid ah iyo waliba qaar SRRC ah oo ku haysta qodobkaas. Sidoo kale Riyaale halkaas buu u fadhiyaa.
11- C/hi oo aan hal ceel, iskuul, isbitaal aan ka samayn magaaladiisii, maxay ka dheefaysaa haddii uu intaas oo cadow ah usameeyey?
12- Dadweynaha Puntland ma noqon karaan qaar uu isagu dilo iyo qaar dartiis loo dilo?
13- Waad maqlaysaan hadalada Feysal Cali Waraabe ee uu leeyahay Muuse Suudi iyo qab-qablayaasha Xamar ha yimaadeen Hargeysa isagoo leh ku xumee C/hi. Horta dadweynaha Sool, Cayn iyo Sanaal Bari ma jirto waxay ka baqaan ilayn nin khasbi kara malaha. Iska daa Puntland waxaan raali ka ahayn dadka Xamar jooga in uu Riyaale soo weeraro laakiin inta C/hi meesha joogo wax wanaag ah ma soo socdaan. Dadka degaankaas jooga looma baahan inay u jawaabaan Feysal Cali Waraabe iyo wax la mid ah, waxaa mas’uuliyadu saarantahay wixii “Puntland” horboodaya. Hadda C/hi isagaa laga rabaa inuu dadkaas difaaco oo dhibta damiyo.
14- Si ay ukala tagaan qab-qablayaasha is aruursanaya waa in C/hi iyo Moorgan socdaan, oo talo malahee la yiraahdaa nadhaafa marka kuwo xaaraanta ku heshiiyey oo hadda Xamar jooga iyagaa ukala tegin sidii ay awal ahaayeen. Waxaana Soomaaliya xukumaya qofkii la yimaada wanaag iyo caddaalad. Puntland hadday inta nimankaas waxaa dhigay cayriyaan ay la yimaadaan qof kale oo sidoodii hore ku soo noqdaan dad nabad iyo Soomaali diyaar u ah, ma jirto cid u diidi karta hogaan Soomaaliyeed.
15- Shakki wuxuusan iiga jirin in haddii aad C/hi is dhaafisaan ay qabqablayaasha kale idiin ku garaabi doonaan in Puntland dowlad ama maamul wixii lagu sheegaba aysan Soomaaliya dhib u keenayn. Marka waa shacabka waxay ku xirantahay in ay keensadaan hogaamiye kale oo Soomaaliya ka gadmaya sida C/Risaaq Xaaji Xuseen oo kale ama ku –xigeenka C/hi waa Maxamade Cabdi ama Al-Xaajiga Maxamed Yaasiinka hadda isa soo taagay ama qof kale oo aan horay dambi uga oolin.
16- Runtii talooyinkaan aan reer Puntlandoow idin siiyey, Soomaalida kale waa igu qabsan karaan oo waxay dhihi karaan maxaad reer tolkaa kaliya nasteexada ugu khaas-yeeshay laakiin jawaab iyo cududaar baan u hayaa. Marka hore ceeb ma leh in qofku dadka u xiga ku bilaabo wanaaga khaasatan markaadan madax ahayn. Tan labaadna ma lihi cid dila oo booba ee waxaan leeyahay wax noqda oo keena nabad iyo caddaalad. Tan seddexaad oo u baahan in la ilaaliyo waa dhaqanka Soomaalida oo haddaad isku daydid in aad qabiil kale wax u sheegto waxaa laguu qaadanayaa in aad qabyaalad uga danleedahay inkastoo mar mar ku rido Somaliland iyo kuwa kalaba.
17- Hadday reer Puntland taladaas diidaan bal aan aragno meeshay arrintu ku dambayso.
18- Puntland-ta uu C/hi ka naxayaa oo uu rabo inuu difaaco miyeysan ahayn tuu lahaa Shimbiraale iyo Gaalkacyo waxaa jooga argagixiso sidoo kale isagoo xukuma Galdogob iyo Bacaadweyna BBC-da ka lahaa waxaa ku yaal hogog argaxiso lagu tababaro?
19- Marka haddadaan aan joogno C/Qaasim iyo C/hi kee khasaaray (loser) ah? C/Qaasim wali Dooxadii Jubba waa raggiisii waxaa usoo kordhay Muuse Suudi, RRA, Cumar Jees, C/Risaaq Biixi iyo rag kale halka C/hi uu helay labo eber oo aan wax u kordhinayn waa Xasan Abshir iyo Deeroow. Eberku kii qof eber ah maahan ee waxaan ka wadaa ma haystaan garab hubaysan oo lagu xisaabtamo. Waxaa dhici karta in qaar reer Puntland ah leeyihiin waan ognahay in aan eberku wax noo kordhinayn laakiin waxaan ognahay in haddii eberka wax lagu dhufto uu waxaas oo dhan eber ka dhigo marka eberka waxaan u istimaalaynaa inaan qabqablayaasha kale ku dhufano oo waxoo dhan eber soo baxaan. Tusaale ahaan Mbagathi X 0 = 0 laakiin waxay leeyihiin mar haddii Cabdullaahi noo joogo dhib ma qabno. Haddaan xisaab ahaan u qorno waa C/hi + 0 (Xasan) + 0 (Deeroow) = C/hi. Marka maskaxdooda la eego waxba may lumin oo C/hi baa wali hortaagan! “No more no less”
Gabagabo: haddaan soo niri diyaarad Soomaali dagaal ma gashooy hadday duushana Afgooye degtooy. Marka C/hi inuu Masaajid Burtinle ku yaal bomb ku tuuro ama nin caan ah Garoowe ku dilo ama Suldaan kalabayr ku dilo ama Qardho shicib ku laayo ama Gaalkacyo iyo Galdogob argagixiso ku sheego maahee inuu qab-qablayaal kale soo jiito ama saaxiibo siyaasadeed keensado ama madaxweyne noqdo ha uga fadhiyina.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 11, 2003
Qaybta 1aad... | Qaybta 2aad... | Qore: XagarYare |